Favicon Generator: ဘယ်လို Favicon လုပ်နည်း
ဒါကအသေးအဖွဲလို့ထင်ရပေမယ့်လှပတဲ့ဆိုက်တစ်ခုကိုရောက်တဲ့အခါနဲ့ browser ထဲမှာပြထားတဲ့သက်ဆိုင်ရာအကြိုက်ဆုံး icon ကိုမတွေ့ရတော့တိုင်းအလုပ်ကမပြီးသေးဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်သိချင်ခဲ့တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်၏မျက်နှာသာပေးမှုသည်အံ့မခန်းဖွယ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ် site ကိုအခြားသူများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုရလိုပါသည်။
အခြေခံ Favicon Setup ကို
သင်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်အတွက်မျက်နှာသာပေးမှုတစ်ခုကိုမသတ်မှတ်ထားပါက၎င်းသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရိုးရှင်းပါသည်။ အလွယ်ဆုံးနည်းကတော့ icon file file ကို drop လုပ်ခြင်းဖြစ်သည် favicon.ico သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ root directory ထဲတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် icon အစီအစဉ်များကိုယူလေ့ရှိသည် မိုက်ခရိုဂျက် (ကြီးမားတဲ့အိုင်ကွန်ဖွံ့ဖွိုးတိုးတက်မှုအပလီကေးရှင်း) ဒါပေမယ့်လည်းကောင်းပါတယ် အခြားရွေးချယ်စရာအိုင်ကွန်ဖန်တီးခြင်း tools များအွန်လိုင်း!
မည်သည့်ရုပ်ပုံဖိုင်ကိုမဆို Dynamic Drive သို့တင်ပြီး၊ ဖိုင်ကိုထုတ်ယူပါ၊ ၎င်းကိုသင်၏ root directory ထဲသို့ထည့်ပါ။ မျက်မှောက်ခေတ် browser များအားလုံးသည်ဤ icon ကို address bar တွင်ပြလိမ့်မည်။
အဆင့်မြင့် Favicon Setup ကို
သင်၏ site ကိုတင်းကျပ်ပြီးအကြိုက်ဆုံး icon ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်လိုပါက HTML ထည့်ရန်ခေါင်းစဉ်အချို့ရှိသည်။
အကယ်၍ သင်သည် WordPress ကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်၎င်းကုဒ်ကိုသင်၏ template ၏ header.php တွင်ထည့်နိုင်သည် အပိုင်း။
Tags: favicon animatedစိတ်ကြိုက်အိုင်ကွန်favicon မီးစက်
12:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 8, 46
ဂရိတ်အစွန်အဖျား, Doug ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ချက်ချင်းပင်မှော်အနည်းငယ်ထည့်ရန်လိုသည်
http://abitofmagic.no/english - ယခုကာတွန်းမျက်နှာသာပေးနှင့်အတူ။
12:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 22
အလွန်အေးမြကာတွန်း gif! ကောင်းတယ်
12:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 35
favicon တစ်ခုဖန်တီးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ဒီဇိုင်း၏လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါကအပေါ်အခိုင်အမာ
12:2008 pm မှာအောက်တိုဘာ 11, 23
ငါကလူတိုင်းရဲ့ site ပေါ်တွင်ဖြစ်သင့်သည်ထင်, Patric ။ ငါ icon ဖန်တီးမှုအတွက်အထူးပြုတဲ့ဂရပ်ဖစ်အနုပညာရှင်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်နှင့်တကယ့်အနုပညာပါ!
2:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 46
ငါ Microangelo ကိုသုံးနေတုန်းပဲ။ အကယ်၍ သင်မသိခဲ့ပါကသင်သည် favicon တွင်အရွယ်အစားပေါင်းများစွာကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ တစ်စုံတစ် ဦး က၎င်းကို desktop ပေါ်သို့ဆွဲယူလျှင် (သို့မဟုတ်အလားတူ) ၁၆ × ၁၆ ဗားရှင်းနှင့်သင်မပတ်သက်ပါ။
2:2012 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 20
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရအိုင်ကွန်ဖိုင်သည်ကွဲပြားသောအရွယ်အစားပုံရိပ်များဖြစ်သည်။ Favicon generator သည် layer ပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးပေးလိမ့်မည်။